ညစ်ညမ်းဂိမ်းလောကီသားတို့သည်အစဉ်အမြဲသတိပေးချက်များနှင့်အတူကြွလာ။ သူတို့ကဂိမ်းစွဲလမ်းဖြစ်ကြောင်းသတိပေးချက်များနှင့်အတူလာ,သင်ဂိမ်းကစားနေစဉ်စက္ကန့်အတွင်းသွားလိမ့်မည်သတိပေးချက်များ။ သို့သော်များစွာသောဆိုဒ်များသငျသညျအကြှနျုပျတို့အရှက်တကွဲဖြစ်ခြင်းဂိမ်းပေါ်တွင်သင်ပေးသောသတိပေးချက်ကိုပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားဂိမ်းသူတို့အားလုံးကစားသမားများအတွက်မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အစွန်းရောက်ခြင်းနှင့်စိတ်မကောင်းစရာရဲ့အချို့အကြောင်းအရာနှင့်အတူလာမယ့်နေကြသည်။ ဤရွေ့ကားဂိမ်းအများဆုံးအမာခံညစ်ညမ်းပရိသတ်များအချို့အဘို့ဖြစ်ကြ၏။ ဒီမှာရှိနေတဲ့လူတချို့ကိုချွတ်ပြီးနှလုံးသားအားလုံးရဲ့မောဟတွေကိုခြောက်လှန့်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီလိုအစွန်းရောက်မှုမျိုးထဲရောက်နေရင်ဒီဆိုက်မှာအိမ်လိုခံစားရပါလိမ့်မယ်။, သင်တစ်ဦးဒိုမီနိုသို့မဟုတ်အစွန်းရောက်ညစ်ညမ်းချစ်မြတ်နိုးတဲ့အမျိုးအစားလျှင်နှစ်ဦးစလုံးသည်ဤဂိမ်းပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်နှစ်ဦးစလုံးရာထူးအတွက်ဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ်နှင့်သင်အမြင်၏ပွိုင့်ကနေကစားဂိမ်းတော်တော်လေးရှားပါးဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားပုံမှန်အနှောင်အဖွဲ့နှင့်ဘီအမ်အိပ်ဂိမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ သင်၏ဆိုက်ပေါ်တွင်အရူးအမူးအရှက်ကွဲခြင်းအချို့ကိုခံစားရလိမ့်မယ်။ အာက္ပါအပိုဒ္တြင္အားလံုးအေၾကာင္းေျပာပါမည္။
ကျနော်တို့မဆိုနောက်ထပ်မသွားမီသင်သိရန်လိုအပ်ပါတယ်အချို့သောအရာတို့ကိုဤဂိမ်းရူးသွပ်သောကြောင့်,ဒါပေမယ့်လည်းဂရပ်ဖစ်ဒါလက်တွေ့ကျသောကြောင့်,မသာမာနှင့်ထိုးစစ်ဖြစ်ကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သင္တို႔အားလံုးရဲ႕ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေတြကိုမခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ေနရင္ဒီကေလးအခ်ိဳ႕အတြက္ဝမ္းနည္းပူေဆြးမႈေတြစတင္ခံစားရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဆိုဒ္၏ဂိမ္းအားလံုးသည္ေခတ္ကာလမွျဖစ္သည္။ သူတို့ကအစကွန်ပျူတာနှင့်မိုဘိုင်းနှစ်ဦးစလုံးအပေါ်,သင့်ဘရောက်ဇာကိုတိုက်ရိုက်မာစတာသို့မဟုတ်ကျွန်ဖြစ်ခြင်းခံစားနိုင်အောင်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပလက်ဖောင်းလိုက်ဖက်တဲ့နှင့်အတူလာကြ၏။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အပေါ်အရာအားလုံးအခမဲ့သင်တို့အဘို့ထံသို့လာကြ၏။, သင်ပင်သင်ကစားရရှေ့၌သင်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်၏စုဆောင်းမှုသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်တွေ့ရမည့်ပြင်းထန်သောနှင့်စွဲငြိဖွယ်ရာအနှောင်အဖွဲ့နှင့်အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းခြင်းအတွေ့အကြုံအချို့နှင့်အတူလာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းအများစုမှာလိင်ဆိုင်ရာဂိမ်းများပါ ၀ င်သည်၊အချို့ကိုသင်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပျော်မွေ့နိုင်လိမ့်မည်ဟုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုသဘောမျိုးပြုလုပ်ရန်အချို့သောနောက်ခံဇာတ်လမ်းများဖြင့်လာသည်။ ဂိမ်းအများစုမှာသင်တစ်ဦးမာစတာအဖြစ်ကစားရပါလိမ့်မယ်နှင့်သင်၏စွန့်ပစ်ခြင်းမှာကျေးကျွန်ရပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအမြားဆုံးရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာသက်ရောက်မှုကစားကာကွယ်ရေးအတွက်သူတို့ကိုတက်ရိုက်နှက်နိုင်ပါလိမ့်မည်,ဝတ်,ပုံးနှင့်ပိုပြီးနှင့်အတူ., သင်သည်သင်၏ငပဲမှတပါးသူတို့၏တွင်းထဲမှာအမှုအရာအမျိုးမျိုးတို့ကိုထည့်ထားနိုင်ပါတယ်,ကစားစရာများနှင့်ပုလင်းကနေလက်သီးမှ. သင်ပင်သူတို့ကိုအော်ဟစ်စေခြင်းနှင့်ဘလူးတုသ်နှင့်အတူဂိုဏ်းဘလူးတုသ်အတွက်စုစုပေါင်းခေါငျးဆောငျသို့သူတို့ကိုငါလှည့်နိုင်ပါတယ်။
ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူလိင်တူချစ်သူတွေခံစားနိုင်မယ့်ဂိမ်းတွေကိုလည်းသူမရဲ့ကျွန်တွေကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းဖို့ရရှိတဲ့ဒိုမီနီယံတွေရဲ့ရှုထောင့်ကနေကစားခဲ့ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ကျွန်တွေမှာအထီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒိုမီနိုဂိမ်းတွေတောင်ရှိတယ်၊ပြီးတော့မင်းကမင်းရဲ့လေ့ကျင့်ရေးအရှက်တကွဲဖြစ်ရတာကိုကြိုက်ရင်မင်းကဒီဂိမ်းကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်။ ကြောင်း၏ထိပ်တွင်,ငါတို့သည်သင်တို့ကိုဤစွန့်စားမှုအတွက်အရှက်ရသူကောင်လေးအဖြစ်ကစားရန်အခွင့်အလမ်းပေးပါ။
ဤသူသည်သင်တို့ဝဘ်ပေါ်မှာရှိစေခြင်းငှါညစ်ညမ်း၏တဦးတည်းနှင့်ဤနေ့၌နှင့်အသက်အရွယ်အတွက်သင်သည်သင်၏ညစ်ညမ်းအလေ့အထများထွက်ရှိစေခြင်းငှါမလိုချင်ကြဘူး။ ဒါေၾကာင့္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာစူးစမ္းေလ့လာမႈကိုခံစားႏိုင္ၿပီးလွ်ိဳ႕၀ွက္ထားမယ္လို႔ ဆိုဒ္တစ္ခ်ိဳ႕မွာေဖာ္ျပထားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်မှတ်ပုံတင်ရန်လုပ်ဘယ်တော့မှမသာကြောင်းကိုလည်း,ငါတို့သည်သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်အပေါ်လာသောအခါငါတို့သည်သင်တို့၏အိုင်ပီလိပ်စာသိဘယ်တော့မှမ. ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ ဆိုဒ္မွာခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ ဆိုဒ္ကိုေရာက္ဖူးသူတိုင္းသိၾကမွာပါ။
© Copyright 2021 HumiliationGames All Rights Reserved